Nagu saabsan - Shandong Xintengwei Soo Dejinta iyo Dhoofinta Co., Ltd.
Beeraha Solutiobs Ee Yaryar
Ryagri wuxuu xooga saarayaa bixinta xalka beeraha yar yar.
Shandong Xintengwei Soo Dejinta iyo Dhoofinta Co., Ltd.(RY AGRI), oo la aasaasay 2014, wuxuu ku yaal Linqing City, Gobolka Shandong, Shiinaha. RYAGRI waa shirkad xirfadlayaal ah oo bixisa makiinado iyo qalab kala duwan oo beeraha ah. Wax soosaarka ugu muhiimsan waa cagafcagafyo, iskudarka goostayaasha, beeroleyda, baalasheyaasha, buufinta buufinta, makiinado dubbeyaal ah, qashin-qubka disc, harraajiyada, subsoilers, iyo bambooyin biyo. Sug Shirkaddu waxay leedahay nidaam tayo iyo adeeg wanaagsan, waxaana loo dhoofiyay Yurub, Czech Republic, Russia, Iran, South Africa, Nigeria, Ethiopia iyo dalal kale.
Sannadkii 2016, shirkaddu waxay billowday inay maal-gashato oo ay aasaasto laantii ugu horreysay ee dibadda - RY Beeraha Koonfur Afrika ， waxaan ku guuleysaneynaa inaan dhammaan waddamada koonfurta Afrika ka koobno ​​kayd ballaaran, iibsi maxalli ah iyo kooxda adeegga.
RY AGRI waxay taageero xoogan ka heshay shirkada waalidka ah ee Shandong Runyuan Industrial Co., Ltd., oo la aas aasay sanadkii 1986 waxayna leedahay in kabadan 30 sano oo khibrad wax soo saar beereed ah. Runyuan wuxuu leeyahay alxanka horumarsan, farsamaynta farsamada, isku imaatinka, aqoon isweydaarsiga habka rinjiyeynta iyo rinjiyeynta, cilmi baarista tikniyoolajiyadda iyo xarunta horumarinta, xariiq casri ah oo toos ah iyo xariiq rinjiyeyn si otomaatig ah, waxaana lagu qalabeeyay goynta laser sare, mashiinnada CNC ee foorarsiga iyo alxanka guryaha iyo kuwa kale iyo kuwa kale qalab casri ah. gacmaha. Waxay ka gudubtay shahaadada nidaamka tayada leh ee ISO9001: 2008.
Waxaan had iyo jeer diirada saarnaa bixinta xalalka beeraha ee haystayaasha yar yar, ujeedkeenu waa inaan dhisno iibsi hal joogsi iyo madal adeeg oo loogu talagalay mashiinada beeraha.
- Ku soo dhowow saaxiibo ka socda adduunka oo dhan shirkadeena booqashada iyo iskaashiga.